GNU / Linux ka noqo Distro ku habboon horumarinta Software | Laga soo bilaabo Linux
GNU / Linux ka noqo Distro ku habboon Horumarinta Barnaamijka
Xilligan Linux waa Boqorka heerka Nidaamyada Hawlgalka ee ay adeegsadaan Takhasusayaasha aagga Teknolojiyada Macluumaadka (IT), ama Servers ama Kooxaha Maamulayaasha Server, iyo heerka Soo-saareyaasha softiweerka sannadkan waxay gaareen heer isku mid ah iyagoo u gudbay sida ku xusan sahanka Sahaminta Developer Overflow Stack Overflow 2016 del Kaalinta 3-aad oo leh 21,7% sida horumariyaha jecel yahay inuu Kaalinta 1-aad oo leh 48,3% gudaha Sahaminta Developer Overflow Stack Overflow 2018.
Xilligan, GNU / Linux Codsiyada Ecosystem wuxuu leeyahay liis ballaaran oo heer sare ah oo barnaamijyo loogu talagalay Horumarinta Barnaamijka (Codsiyada iyo Nidaamyada) in si fiican loo rakibay, loo qaabeeyey laguna rakibay gudaha GNU / Linux Distribution wuxuu dabooli karaa noocyo badan oo fursado ah barnaamijyada luuqadaha.
2.1 Tifaftirayaasha Terminal
2.2 Tifatirayaasha Fudud ee leh Qaab Sawireed
2.3 Tifatirayaasha Hormarsan oo leh Qaab Sawireed
2.4 Tifatirayaasha isku dhafan
3 Deegaanada Barnaamijyada Isku-dhafan
4 Qalabka Kumbuyuutarka
5 Nidaamyada Xakamaynta Nooca
6 Distros (GNU / Linux Qaybinta)
6.1 Caadi ah
6.2 Takhasus gaar ah leh
Liiska codsiyada loogu talagalay GNU / Linux ee aan gadaal ka baari doonno hadda waa qaar ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan ee loo adeegsado aaladda horumarinta Software-ka ee Nidaamkan Howlgalka. Waa la cusbooneysiiyaa si isdaba joog ah waxayna leeyihiin taageero wanaagsan.
Had iyo jeerna codsiyo cusub ayaa soo baxa ama codsiyada cusub ee hadda jira waxaa lagu daraa adduunka Microsoft ama Apple, kor u qaadista heerka tayada codsiyada lagu horumarin karo hoosta GNU / Linux.
Sannado ka hor qaar baan samaynay daabacaadda ku saabsan mawduuca kuwaas oo mudan in la xuso oo dib loo eego, sida Diyaari Ubuntu (ama distro kale) horumarinta webka y Qalabkeyga loogu talagalay Horumarinta Webka iyo Naqshadeynta GNU / Linux. Laakiin maanta waxaan ku sameyn doonaa dib u eegis ballaaran oo iyaga ka mid ah iyo kuwa la heli karo ee 'Distros' oo horay loogu habeeyay horumarinta Software-ka.
Codsiyada loogu talagalay horumarinta softiweerka wax badan baa ka soo kordhay tayada iyo waxqabadka GNU / Linux sidaas darteed u oggolaanaya taageerada (saldhigga) lagama maarmaanka u ah kobciye Software ama khabiir ku ah inuu ku horumariyo Nidaamkan Hawlgalka habka ugu habboon ugana dhigo inuu yahay Nidaamkooda Hawl ee ugu muhiimsan.
Horumarinta Barnaamijka GNU / Linux: Tifatirayaasha, IDEs iyo Distros
Waa tan waxa hadda na sugaya GNU / Linux World ee aagga horumarinta softiweerka:
Tifatiraha qoraalka waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad abuurto oo aad wax ka beddesho feylal dijitaal ah oo ka kooban qoraal caadi ah, oo badanaa loo yaqaan faylasha qoraalka ama qoraalka caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira Tifaftirayaal Qoraal ah oo horumarsan oo u oggolaanaya ama fududeynaya aqoonsiga luqadda barnaamijka lagu isticmaalo qoraalka dhexdiisa, fududeynta fahamkiisa iyo adeegsiga feylka dhexdiisa. Qaarkood waxay noqon karaan Terminal, taasi waa, iyada oo aan la helin qaab muuqaal ah, kuwa kalena waxay noqon karaan Desktop, taas oo ah, iyadoo la adeegsanayo qaab muuqaal ah.
Ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo isticmaalo GNU / Linux waxaan haynaa:
Tifatirayaasha Fudud ee leh Qaab Sawireed
Tifatirayaasha Hormarsan oo leh Qaab Sawireed
Naqshadeeyaha Shabakadda Google
Miiska iftiinka ah
Tifatirayaasha isku dhafan
Deegaanada Barnaamijyada Isku-dhafan
Jawiga Barnaamijyada Isku-dhafan, oo inta badan loo yaqaan 'IDE' oo laga soo gaabiyo magaca Ingriisiga "Is-dhexgalka Horumarinta Is-dhexgalka", wax kale ma aha barnaamij ama codsi inta badan lagu duubay tifaftire koodh, isku dubaride, debugger, iyo iskuxiraha garaafyada. IDEs waxay noqon karaan codsiyo iskood ah ama waxay qeyb ka noqon karaan codsiyada jira.
Python shaqo la'aan
Si fudud Fortran
Muuqaalka Muuqaalka Visual Studio
Aqoonsiga Python PEthon
Qalab Horumarinta Software-ka, oo inta badan loo yaqaan 'SDK' oo loo soo gaabiyo magaca Ingiriisiga "Qalabka Horumarinta Software", Ma aha wax kale oo aan ka badneyn oo ka kooban qalab ka caawiya Soo-saaraha Soo-saareyaasha inuu naqshadeeyo codsiyada iyo nidaamyada u oggolaanaya una fududeynaya shaqada deegaan teknolojiyad gaar ah..
Codsiyada lagu soo saaray SDK gudahood waxaa loogu talagalay qaar ka mid ah nidaamka qalliinka, barxadda qalabka, fiidiyoowga ciyaarta fiidiyowga ama xirmo software gaar ah. Waxaa jira ilo badan oo SDK ay ku jiri karto, kuwaas waxaa ka mid ah:
Isku xirnaanta barnaamijka barnaamijka (API).
Jawi horumarineed oo isku dhafan (SDI) oo leh a Debugger iyo a Isku-darka
Xeerarka tusaale iyo dukumiinti.
Un Emulator ee deegaanka teknoolojiyadda loo baahan yahay.
Nidaamyada Xakamaynta Nooca
Nidaamka xakamaynta nooca (ama nidaamka xakamaynta dib-u-eegista) waa isku-darka tikniyoolajiyada iyo dhaqanka si loola socdo loona xakameeyo isbeddelada lagu sameeyay feylasha mashruuca, gaar ahaan koodhka isha, dukumintiyada iyo bogagga shabakadda.
Dhammaan nidaamyada xakamaynta noocyadu waxay ku saleysan yihiin haysashada bakhaar, taas oo ah dejinta macluumaadka uu nidaamku maamulo. Keydkan waxaa ku jira nooca nooca ah ee dhammaan waxyaabaha la maamuley. Isticmaale kastaa wuxuu abuuri karaa nuqul maxalli ah isagoo nuqul ka samayn kara waxyaabaha ku jira keydka si uu u oggolaado isticmaalkiisa. Waa suurtagal in la nuqulo nuqulkii ugu dambeeyay ama nooc kasta oo taariikhda ku kaydsan.
Nota: Dhamaantood Git wuxuu jecel yahay bulshadiisa weyn, horumar weyn iyo fiilooyin balaaran iyo Macaamiil garaaf ah. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato macaamiisha garaafka ah ee 'Git', ka booqo xiriiriyahan bogga rasmiga ah: Macaamiisha garaafka ah ee 'Git' ee Linux.
Distros (GNU / Linux Qaybinta)
Nidaamka Hawlgalka Bilaashka ah ee laga sameeyay Linux Kernel iyo qaybo ka mid ah codsiyada GNU taas oo u oggolaanaysa inay bixiso horumarin si ay si fudud ugu rakibto iyada oo loo marayo qalabka loogu talagalay qaabeynta iyo nidaamyada maaraynta xirmooyinka ee rakibidda softiweer dheeraad ah. Xulashada qaybinta waxay kuxirantahay baahiyaha isticmaalaha iyo dhadhanka shaqsiyadeed.
Heerka Soo-saaraha Sooftiweerka, waxaan ka helnaa waxyaabaha soo socda ee lagula taliyay:
Takhasus gaar ah leh
Sii deynta nooca 1.1 ee Distro MinerOS GNU / Linux ayaa la filayaa mustaqbalka dhow. taas oo ka duwan nooca 1.0 oo ah mid gaar u ah adeegsiga Guryaha, Xafiiska, Macdanta Dijital ah iyo Farsamayaqaanada Kumbuyuutarka, waxay u gaar noqon doontaa Soo-saareyaasha Barnaamijka, Ciyaartoyda iyo Soo-saareyaasha Mawduucyada Multimedia. Si aad wax badan uga ogaato horumarka mustaqbalka nooca nooca 'Distro' waxaad gujin kartaa magaceeda: MinerOS GNU / Linux 1.1 (Onix) ama ku saabsan hadda MinerOS GNU / Linux 1.0 (Petro).
Illaa iyo hadda waxaan rajeynayaa daabacaddan inay waxtar badan kuu leedahayAma inaad ku rakibto barnaamijyo badan barnaamijkaaga hadda jira 'Distro' si aad uga dhigto mid ku habboon Soo-saareyaasha Barnaamijka ama go'aansado inaad u isticmaasho mid lagu taliyay iyaga. Ilaa qoraalka soo socda!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » GNU / Linux ka noqo Distro ku habboon Horumarinta Barnaamijka
asxaabta koowaad, tas sembrao
Jawaab juliuco nikelado
Waad ku mahadsantahay faalladaada! Had iyo jeer waa farxad in la ogaado in qodobbada ay akhriyaan kuna qaddariyaan cabbirkooda habboon akhristayaasha Blog-ka.
Jawaab Ing. Jose Albert
Maqaalka waa mid aad u wanaagsan laakiin kuma raacsani qeybta labaad ee sadarka koowaad. GNU / Linux waxay leedahay waddo ka sii fiican oo ka wanaagsan oo boqorka loogu noqon karo kuwa horumariya, runtiina in badan oo naga mid ah ayaa si sax ah ugu isticmaalnaa dhammaan faa'iidooyinka ay u leedahay horumarinta. Iyo waliba qaab bilaash ah.
Marka la soo gaabiyo: Waxaan u isticmaalaa vim leh + 60 plugins, oo leh feylka qaabeynta qaabeynta 1400-line oo ay ku jiraan shaqooyin aan ka qorsheeyay VimL si aan u sameeyo waxa aan doonayo. Waxaan u isticmaalaa si wadajir ah tmux multiplexer sidaa darteed waxaan gacanta ku hayaa suurtagalnimada inaan ku dhufto terminal-ka si aan ugu isticmaalo vim dhammaan qalabka nidaamka deegaanka ee Unix: grep, sed, awk,… git sokow, dabcan. Wax walba oo ka soo baxa terminaalka, oo leh toobiyaha kumbuyuutarrada, oo la magac leh iyo qaabeyn si fiican loo qabtay.
Qaabeynta qaabkeyga 'vim', my tmux, my zsh (bedelka qolofta leh ee loo yaqaan 'bash') iyo barnaamijyo kale oo badan ayaa la keydiyaa oo lagu galiyaa repo dadweynaha github. Wixii rakibid kasta oo nadiif ah ee GNU / Linux, waa inaan ku xiraa iyada oo loo yaqaan 'git clone' oo aan ku abuuraa isbarbardhigyo leh stow. Aniguna horeyba waan uhelay qaabeynta igu qaadatay sanado badan si aan ugu cadeeyo diyaar ahaan adeegsiga, ilbiriqsiyo gudahood, mashiin kasta oo leh nidaam ku saleysan Unix (haa, Mac sidoo kale wuu shaqeyn lahaa).
Way iska cadahay inaanan u heellanayn barnaamijka .Net ama mid ka mid ah teknoolojiyada si fiican ugu wada nool nidaamka hawlgalka ee isla shirkadda: Windows. Haddayna barnaamij ka samayn lahayd Java, waxay adeegsan lahayd IDE wanaagsan, mid ka mid ah kuwaadan sheegin: kuwa ka socda JetBrains, ee la bixiyo sabab uma aha in la xuso.
PS: Waxaan wax ku bartaa C / C ++, Go, Python iyo Perl, laakiin waxaan adeegsaday daraasiin luqadood, sida Basic, Bash, Lisp, eLisp, VimL, ​​Lua, PHP, iyo hirgelinta kala duwan ee SQL. Dhammaantood leh vim / neovim, oo ay weheliyaan Emacs yihiin boqorrada barnaamijka. Waxay bilaabeen sanado badan kahor laakiin way bislaadeen kamana aysan bixin isbedelka, ilaa heer ay maanta adeegsigooda qarxay Tayo ahaan, kaliya barnaamijka Microsoft ee VSCode ayaa siyaabo kala duwan ugu dhowaada iyaga, wuxuuna ku garaacaa C # (waa midka aad isticmaali laheyd hadaad barnaamij ka sameyn laheyd C #), laakiin ma jiraan wax kale. Atom iyo ST3 sifiican ayey uga hooseeyaan. Iyo in aan lagu xusin nano, taas oo ah tifaftire, maadaama ay ka maqan tahay wax walba. xD
Ku jawaab URxvt
ma wadaagtaa kanaga .vimrc?
Waan xiiseynayaa 🙂
Ku jawaab Morphheus
Faallo aad u fiican, oo waliba aad u kobcinaysa! Waad ku mahadsantahay tabarucaadkaaga macluumaad ee ku saabsan adeegsiga barnaamijyadan diiradda lagu saaray horumarinta softiweerka.
Diego de la Vega sawirka meeleynta dijo
Aad baan uga helay qoraalkaaga. Waxay ahayd lagama maarmaan in la dhigo (ex-Delphians / Pascalians) Laasaros, oo ah IDE aad u dhameystiran.
Waad ku mahadsantahay inaad fikirkaaga la wadaagto taageerayaasha Linux.
Jawaab Diego de la Vega
munaarad robot dijo
Waad ku mahadsantahay wadaagis, maqaal aad u wanaagsan !!
Jawaab rootada munaarad
Waan ogahay inaysan taasi ahayn, laakiin daabacaadaha kale qorayaasha oo dhan waxay qoraan magacyadooda, laakiin halkan waxay igu dhufatay inay qasab tahay inay tilmaamaan «Ing. Jose Albert »« Ing. » "Injineer" hehe waxay u akhrineysaa si aad ufiican ama sidaad ubaahantahay inaad uqoro
Hore ayaan u xaliyay dhibaatadaada! Salaan, nasiib iyo guul.
Dhammeystirka jawaabta URxvt waa inaan kuu sheegaa inaan ku saleysanahay Daraasad Developer Stack Overflow 2016 taas oo Linux Platform-ka ay ku jirto kaalinta 3aad iyadoo 21,7% ay tahay tan ugu jecel horumariyeyaasha. Baadhitaan dheeraad ah, taas oo ah, raadinta Stack Overflow Developer Survey 2017 iyo Stack Overflow Developer Survey 2018, waxaan ogaaday in Linux Platform-ku u korodhay 24.2% si uu u joogo kaalinta 3-aad ee 2017 wuxuuna kor ugu kacay 48,3% darajo kaalinta 1aad ee sanadka 2018.
Sidaa darteed, gabi ahaanba waad saxan tahay, taasi waa, Linux Platform-ka waa Boqorka Nidaamyada Hawlgalinta Soo-saareyaasha Sooftiweerka ee 2018 adduunka oo dhan sida ku cad boggan iyo Sahanka Dunida caanka ah ee la ixtiraamo
Diego de la Vega horeyba wuxuu ugu daray Laasaros daabacaadda si IDE-ga waxtar leh aan looga tagin talooyinka.
Marka aad baad u mahadsan tahay!
Haa, laakiin sidoo kale ma qiimeyn doono tayada GNU / Linux, Windows ama Mac xagga horumarka tirada codadka ee sahan, tan iyo markaas waxaan ku dhacaynaa qaldan ad populum, taas oo ah, «isagu waa Boqorka maxaa yeelay wuu adeegsadaa dad badan ", marka ugu habboon ay noqon laheyd in la yiraahdo" isagu waa Boqorka X ama sababaha Y ", taasi waa, in lagu doodo caddeyn wixii la xaqiijiyey.
In sanadaha 2017 iyo 2018 isticmaalka GNU / Linux ee ka mid ah kuwa soo koraya ay sii kordheyso ayaa kaliya muujineysa in horumariyayaashu ay ogaanayaan inay u keeneyso faa iidooyin, waxaanan u maleynayaa inay tani xiriir la leedahay soo saarista GNU / Linux lafteeda.
Haa waa run in waxaas oo dhan ay ila yaabaan. Emacs wuxuu ahaa codsigii ugu horeeyay ee GNU taarikhda hadana wanaagiisa weyn ayaa yimid waqti dambe, sida caanka org-mode, 2006, ama xitaa kuxiran git (magit), oo ah mida ugu dhameystiran ee aad awoodid. hel.
Vim waa Vi la wanaajiyay, sidoo kale waxay leedahay sanooyinkeeda waxaanan fiirinayaa in isticmaalkeedu sii kordhayo, oo laga yaabo inay saameyn ku yeelato fargeeto neovim ah oo horumarro badan lagu soo kordhiyay, taas oo horeyba ugu dhowaa 27.000 xiddigood inkasta oo ay tahay barnaamij keliya, taas oo ah in la yiraahdo , oo aan lahayn garaaf garaaf ah
An Emacs distro loo yaqaan Spacemacs ayaa noqday caan, taas oo ah midowga u dhexeeya Vim iyo Emacs (weli waa qaabeyn aad u caado ah oo qof walba sameyn karo).
'Linux ricing' ayaa noqda mid caan ah, taas oo ah qaab loo qaabeeyo GNU / Linux iyada oo aan laheyn jawi desktop ah (Gnome, ama XFCE, ama KDE, Mate, Midnimo, LXDE, LXQT, Enlightment, iyo ...) oo leh maamulayaasha daaqadaha ugu yar (dwm, xmonad, laga cabsado ama i3wm hogaaminta oo ah kuwa ugu caansan dhawaanahan).
Anigana waan isbadalay. Waan joojiyay adeegsiga Windows, waxaan sameeyay dhamaan habka isbeddelka, waxaan isticmaalay dhamaan barnaamijyada ku xusan qodobkaan iyo dhamaadka wadada aan imid waxa ay noqon laheyd i3wm vim / neovim (iyagu hada waa isku mid), tmux, iyo isku day samee wax kasta oo suurtagal ah ee ka yimaada galka, si aad ugu sahlanaato. Ilaa xad ah: surfraw wuxuu ii ogolaanayaa inaan raadiyo boqolaal ilo macluumaad ah, oo lagu furo biraawsarka la qaabeeyey, kiiskeyga, w3m, oo ka shaqeeya gudaha terminaalka. Muusig ahaan: cmus. Wadahadal ahaan: irssi ama weechat. Qolof ka dhameystiran bash: zsh.
Ilaa iyo inta aan u adeegsanayo hareeraha vim (oo leh h, j, k iyo l halkii fallaadhaha) dhammaan codsiyada la soo sheegay, iyo markaan ka soo galo shabakadda, ama Chromium ama Firefox, sidoo kale waxaan u isticmaalaa, aniga oo wata fiilooyin badan oo Waxay joogeen sannado, layaab markii aan ogaaday: cVim, VimFX, Vixen, QuantumVim, iwm. Xaqiiqdii, hagitaankan vim waxaa lagu hawl gelin karaa Emacs (qaabka xun), Qoraalka Sare (guridda), Atom (oo leh fiilooyin), VSCode (oo leh fiilooyin), Qt Abuuraha (xulashooyinka), JetBrains IDEs (xulashooyinka) ...
Waxaas oo dhami waa kuwo aad u xiiso badan maxaa yeelay waxa u muuqan kara inay taasi tahay maxaa yeelay waa duug ama waagii hore waxay joojisaa in la isticmaalo oo codsiyo cusub oo ka wanaagsan ayaa soo baxa, tanina ma dhicin, waa iska soo horjeed. Kuwii ugu da'da weynaa waa kuwa aad loo dheellitiri karo, la qiyaasi karo, leh waxyaabo badan oo dheeri ah isla markaana wax badan ku soo koobi kara.
Sannadkii 95 waxaan horey u isticmaali jiray Windows 95, waxaanan bartay inaan wax barto barnaamijka waxyar kadib. Maan bilaabin adeegsiga GNU / Linux ilaa 2008 isbadalku aad buu iigu adkaaday, wuu igu kacay laakiin sanadihii la soo dhaafay waan la qabsaday. Anigu ma isticmaalin Vim 3 sano, sidaa darteed waan isticmaali doonaa tan iyo qiyaastii 2015. Waxay umuuqataa inay noqon laheyd dhanka kale, maahan? Waa hagaag waa wax aad u xiiso badan, maxaa yeelay dib ugama laabto ama waalan xD
Diiwaanka, Emacs wuxuu sameeyaa wax ka badan Vim, halka Vim uusan sameyn karin wax kasta oo Emacs sameeyo, laakiin Emacs wuxuu sameeyaa wax ka badan inta aan weydiisto (waxay u egtahay OS) halka Vim uu 100% diirada saarayo inuu noqdo tifaftire.
URxvt waxtarka ugu fiican sida kan kale. Khibradaada aad u leedahay GNU / Linux waa mid weyn fully Waxaan rajeynayaa inaad wax badan noogu sheegi karto adoo adeegsanaya faallooyinka kale ee daabacaadaha kale ama daabacaaddaada. Ma leedahay blog ama degel internet kuu gaar ah?
Onix iyo Petros dijo
Waxay ahayd qoraal wanaagsan illaa aan arkay Onix iyo Petros xD !!!
Jawaab Onix iyo Petros
Waxaan jeclaaday archlinux aad ufiican inkasta oo dhamaan kuwii hore aan isticmaalo oo ay yihiin wax fudud oo weyn. waad ku mahadsantahay qoraalkan
Ku jawaab dev.faiber
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga weyn… Salaan, Faiber!
LeoCAD: barnaamijka naqshadeynta CAD ee LEGO
OpenSUSE Tumbleweed dadka isticmaala waxay helaan LibreOffice 6.1, Mozilla Firefox 61 iyo astaamo kale oo badan oo cusub